Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-plastika - orinasa mpamokatra fantsona fantsom-bokatra China
Mpifandray azo sokafana
Ny fitaovan'ny mpampitohy azo sokafana sy ny locknut azo sokafana dia polyamide namboarina manokana. Ny diplaoma fiarovana dia IP50. Famonoana tena, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium (manome fahafaham-po ny RoHS). Ny halavan'ny maripana dia min-30 ℃, max100 ℃, fotoana fohy120 ℃. Mainty ny loko (RAL 9005). Afaka mifanaraka amin'ny fantsona misokatra WYT izy io. Ny fitaovan'ny mpampitohy azo sokafana dia polyamide namboarina manokana. Manana kofehy metrika sy kofehy PG izahay.
Connector siko plastika
Ny fitaovan'ny mpampitohy kiho plastika dia polyamide. Manana volondavenona izahay (RAL 7037), mainty (RAL 9005). Ny halavan'ny maripana dia min-40 ℃, max100 ℃, fotoana fohy120 ℃. Ny flame-retardant dia V2 (UL94). Ny mari-pahaizana fiarovana dia IP66 / IP68. Flame-retardant: famonoana tena, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium, nandalo RoHS. Afaka mifanaraka amin'ny fantsona rehetra izy io afa-tsy ny fantsona WYK. Manana kofehy metrika sy kofehy PG sy kofehy G izahay.
Varahina nopetahany nickel ny fitaovana. Ny halavan'ny maripana dia min-40 ℃, max100 ℃. Amin'ny fampiasana tombo-kase mety, ny diplaoma Protection dia mety hahatratra IP68. Manana kofehy metrika sy kofehy PG sy kofehy G izahay. Fametahana mora ny kiho mpampitohy 45 ° / 90 ° ary miondrika apetraka mandritra ny fametrahana.
Izy io dia mpampitohy fantsom-by vy. Ny vatan'ny vatana dia varahina vita amin'ny nickel; ny tombo-kase dia novaina fingotra. Ny mari-pahaizana momba ny fiarovana dia mety hahatratra IP68. Ny halavan'ny mari-pana dia min-40 ℃, max100 ℃, manana kofehy metric izahay. Ny tombony dia ny fiantraikany tsara sy ny fanoherana ny hovitrovitra, ary ny fantsom-panafody dia manana fikandrana mihidy mafy.
Connector Mamarika tombo-kase miaraka amin'ny tsindrona fanampiana
Ny fitaovana dia polyamide. Mampiasà tombo-kase mety O ao anatin'ny faritry ny clamping, IP66 / IP68, amin'ny fampiasana siligaoma famehezana manodidina ny kofehy. Manana loko volondavenona (RAL 7037), mainty (RAL 9005) izahay. Ny halavan'ny maripana dia min-40 ℃, max100 ℃, 120 fotoana fohy ℃. Ny flame-retardant dia V2 (UL94). Ny famonoana tena, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium, dia nandalo RoHS. Afaka mifanaraka amin'ny fantsona rehetra izy io, afa-tsy ny fantsona WYK. Manana kofehy metrika sy kofehy PG izahay.
Connector Miaraka amin'ny fanamaivanana ny strain amin'ny kofehy vy
Ny fitaovana dia polyamide miaraka amin'ny kofehy varahina vita amin'ny nickel. Ny mari-pahaizana fiarovana dia IP68, mampiasa siligaoma famehezana manodidina ny kofehy. Manana loko fotsy (RAL 7037), mainty (RAL 9005) izahay. Ny retardant amin'ny lelafo dia V2 (UL94). Ny halavan'ny maripana dia min-40 ℃, max100 ℃, 120 term fohy. Ny famonoana tena, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium, dia nandalo RoHS. Ny fananana dia fanoherana mahery vaika, fifamatorana kambana avo lenta, fanamafisana ny tariby. Afaka mifanaraka amin'ny fantsona rehetra izy io, afa-tsy ny fantsona WYK. Manana kofehy metrika sy kofehy PG izahay.